DEG DEG:- Wafdigii uu hogaaminaayay madaxweyne Xasan Sheekh oo ka dhoofay magaalada Brussels kuna sii jeeda....
on September 17 2013 Wafdigii uu hogaaminaayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii shalay ka qeyb galay shir looga hadlaayay arimaha Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka ayaa goordhaw ka dhoofay halkaasi, iyagoona u ambabaxay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
Wafdiga uu hogaaminaayo madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Marwo Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirka gaashaandhiga C/Xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Afhayeenka madaxtooyadda Soomaaliya islamarkaana ah la-taliyaha madaxweynaha Injineer C/raxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow) ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdi uu horkacaayo ay goordhaw u amba-baxeen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, halkaasi oo ay ku sugnaan doonaan muddo labo maalmood ah.
Injineer Yariisoow ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga kula kulmi doonaan madaxda dalkaasi, waxaana ay ka wada hadli doono arimo ku saabsan xiriirka labada dal, iyagoona sidoo kale la kulmi doona jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan halkaas.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii uu soo gaba gabeeyo safarkiisa dalka Talyaaniga waxa uu u amba bixi doonaa magaalada Washington DC ee dalka Mareekanka, halkaasi oo uu kula kulmi doono mas�uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaas.
Madaxweynaha ayaa kulankaasi ka dib usii gudbi doono gobalka Ohio ee dalka Mareekanka, halkaasi oo lagu wado inuu kula kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan, waxaana uu markaas ka dib usii gudbi doonaa New York, si uu uga qeyb galo shirka guud ee Qaramada Midoobay oo halkaasi ka dhici doona.
Dowladda Soomaaliya ayaa mudooyinkaan dambe bilaawday dadaalo xoogan oo ay ku dooneeyso inay taageero dhaqaale ugu raadiso dalka Soomaaliya, si loo helo qarashaad lagu bixiyo sugida amaanka oo haatan faraha kasii baxaaya.